Safaaraddii Eretria ee Itoobiya oo dib loo furay – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASafaaraddii Eretria ee Itoobiya oo dib loo furay
July 16, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Safaaraddii Eretria ee Itoobiya oo dib loo furay
(Warqaat.Com)–Eritrea ayaa dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd Ethiopia maanta oo isniin ah, waana caddeeyn kale oo muujineeysa in xiisaddii Labadda Wadan ay hoos u dhacday.
Ra’iisul wasaraha Ehiopia Abiy axmed iyo Madaxweeyne Isaias Afwerki ayaa dib u furay Safaaradda, Magaaladda Caasimadda ah ee Addis Ababa, kadib xaflad kooban oo la qabtay.
Todobaad ka hor Labadda Hugaamiye waxay ku dhawaaqeen in Dagaalkii u dhexeeyay uu dhamaaday.
Hugaamiye yaashu waxay balan qaaadeen in labadda Dal ay sameeyn doonaan xiriir cusub islamarkaana ay dhaqaalaha iska kaashan doonaan.
684,632 total views, 9,298 views today
684,632 total views, 9,298 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
684,505 total views, 9,297 views today
684,505 total views, 9,297 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
684,538 total views, 9,300 views today
684,538 total views, 9,300 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
684,601 total views, 9,302 views today
684,601 total views, 9,302 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
684,655 total views, 9,297 views today
684,655 total views, 9,297 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]